Ireo tranokala tsy voasakana (2020) - Henoy ny mozika na aiza na aiza - Fialam-Boly
Ny mozika dia toy ny zava-mahadomelina ary io ihany koa no fanafody tsara indrindra nananantsika satria misy fiatraikany lehibe eo amin'ny fiainantsika izany.Tiantsika rehetra ny maheno mozika amin'ny toe-javatra rehetra. Ataovy izany rehefa faly isika, malahelo na miady saina. Izahay dia mila zavatra hifandraisany ary manampy koa ny manova ny toe-pontsika.
Amin'izao fotoana izao dia be dia be ny teknolojia vaovao ahafahantsika miditra amin'ny mozika an-tserasera koa ankehitriny. Amin'ny tranokala maro be manome mozika an-tserasera, azonao atao izao ny mihaino ny mozika tianao na aiza na aiza.Misy tranokala mozika tsy voasakana maromaro ahafahanao mihaino mozika.
Ny zava-misy dia noho ny antony sasany, ny ankamaroan'ny sekoly na ny oniversite dia manakana tranokala sasany, noho ny fisian'ny atiny mahery setra na zavatra hafa. Noho izany, ireo tranonkala azo idirana dia fantatra amin'ny tranokalan'ny mozika tsy voasakana. Mora be ny mitady ireo tranonkala ireo ary maimaim-poana ihany koa ny misintona.
Toerana mozika tsy voasakana tsara 2020:
Eto izahay dia hanao lisitra anao ny sasany amin'ireo tranonkala mozika tsy voasakana:
Ao amin'ny PureVolume, azonao atao ny mahita ny mozikan'ireo karazana rehetra izay misy koa ireo làlana taloha sasany izay nanintona ny fon'ny olona an-tapitrisany.PureVolume dia maharaka hatrany ary manana ny mozika malaza indrindra amin'ny fotoana rehetra. Azonao atao koa ny mitady ny mozika tianao, rakikira na koa mpanakanto ary koa hetsika iray koa.
PureVolume dia tranokala mozika tsy voasakana izay azo idirana amin'ny toerana rehetra. Tsy maninona na aiza ianao. Noho izany, raha mitady mozika ianao amin'ny karazana fankalazana na fety, dia avelao aho hiteny aminao fa eo amin'ny sehatra tsara ianao satria PureVolume dia hanome anao karazana mozika rehetra mifototra amin'ny zavatra tianao sy tianao.
GrooveShark dia toy ny iray amin'ireo tranonkala mozika malaza tsy voahidy.Tranonkala malaza izy io hihainoana mozika maimaimpoana nefa tsy mila sonia. Ampiasaina any am-pianarana, any amin'ny oniversite, na any amin'ny toeram-piasana mihitsy aza.Izy io dia manana endri-javatra maro samihafa izay omen'ny tranonkala an'ireo mpampiasa azy. Ny sasany amin'ireo fiasa dia ahitana ny fitadiavana ilay hira na mpanakanto.
Ny mpampiasa azy dia afaka misintona ireo hira tiany ihany koa. Noho izany, azon'izy ireo atao ny mihaino azy rehefa avy eo ivelan'ny Internet.Ny tena tiako indrindra momba ny GrooveShark dia ny fanomezana anao fidirana maimaim-poana amin'ireo rakikira Music manokana. Noho izany, eto dia azonao atao aza ny mahita ireo làlana farany misy fironana na rakikira, horonantsary ary izay hira ho avy ao amin'ny tranonkalany.
Azonao atao ny mamorona lisitry ny playlist ho anao miaraka amin'ity tranonkala ity ary afaka mikaroka sy mitendry ireo hira tianao ihany koa ianao amin'ny dingana tsotra fotsiny. Ny fomba fampiasana ilay tranokala dia tsotra sy tsotra. Ny hany mila ataonao dia ny mitsidika ny tranokala fotsiny ary mampiditra izay hira na mpanakanto tadiavinao ary manomboka mihaino azy.
Raha toa ianao ka liana amin'ny fisintomana ny mozika dia tsindrio fotsiny ny anaran'ny hira dia ho hitanao ny bokotra fampidinana.Ka raha mitady tranokala misy fanangonana mozika goavambe ianao dia tsy maintsy mitsidika an'ity tranonkala ity.
Ity tranonkala mozika tsy voahidy ity dia tranokala radio maimaimpoana maimaim-poana izay mandefa hira am-polony mahaliana sy mampiankin-doha loatra. Misy hira an-tapitrisany azo alaina ao amin'ny Slacker.Tsotra ihany koa ny fampiasana an'ity tranonkala ity. Azonao atao ny mitsidika mivantana ny pejin-tranony ary mahita ny lisitry ny fiantsonana maimaim-poana handefasana radio.
Ny olona dia mihevitra ny Slacker Radio ho iray amin'ireo sehatra tsara indrindra handefasana mozika araka ny valiny sy naoty.Noho izany, amin'ny ankapobeny dia manome famandrihana karama izy ireo. Saingy, ny kaonty maimaim-poana koa dia omena radio internet vitsivitsy voafetra ho an'ireo mpampiasa maimaimpoana koa.
Rehefa te-hihaino mozika ianao, dia alao antoka fa mifantina ilay karazana karazany ianao, izay mampiseho lisitra hafa.Hita amin'ny sarin'ny artista ny antsipirian'ny mozika manokana.Izao, ny tokony hataonao fotsiny dia tsindrio fotsiny ny bokotra Play mba hanombohana ny streaming.
Ity tranokala ity dia vokatry ny Google ka noho izany tsy voasakana ny sekoly na ny oniversite na ny toeram-piasana. Raha lazaina amin'ny marina dia toy ny iray amin'ireo tranonkala ankafiziko mihaino mozika ity.Eto dia afaka mahazo ny ankamaroan'ny hira ianao. Betsaka ny rakikira hita ao amin'ity mozika Google ity koa.Ity misy safidy ho an'ny famandrihana karama izay manomboka amin'ny $ 99,99 isam-bolana.
Amin'ity famandrihana ity dia ahafahanao manary ireo doka tsy ilaina ary mamaha endri-javatra mahavariana kokoa.Fa ho an'ireo mpampiasa hafa, izay tsy te-handray famandrihana karama, misy famandrihana maimaim-poana ihany koa mba hankafy mozika maimaim-poana.
Izy ireo koa dia manana ny rindrambaiko maimaim-poana izay azon'ireo mpampiasa ampiasaina amin'ny traikefa haingana sy tsara kokoa. Saingy, raha zatra ny kinova an-tranonkala ianao dia tsara tanteraka izany ary afaka manohy mampiasa ny kinova tranonkala ianao.Ary koa, hidirana amin'ny Google Music, mila ataovy izay hahazoana antoka fa manana kaonty Google ianao satria hifandray amin'ny kaonty Google anao.
Soundzabound dia manana mozika maimaim-poana isan-karazany ao amin'ny tranombokiny midadasika.Ny zava-misy dia natsangana ho an'ny fanabeazana ity tranokala ity, noho izany, alao antoka fa tsy manana zavatra tsy ara-dalàna ity tranonkala ity. Misy mozika tsy misy Royalty misy izay mamela ny mpampiasa azy na ny mpianatra hampiasa ireo ho an'ny asany fanabeazana ary koa hampiala voly ny tenany ihany koa.
Noho izany, afaka milamin-tsaina ianao rehefa mitsidika an'ity tranonkala Soundzabound ity ary mihaino tsara izay rehetra tadiavinao.
TuneIn dia manolotra karazana fanangonana hira isan-karazany amin'ny mpampiasa azy. Izy io dia serivisy freemium mifangaro izay manolotra ny kinova maimaim-poana amin'ny tranokala ho an'ny mpampiasa rehetra.Azonao atao mihitsy aza ny mamaha endri-javatra maro kokoa amin'ny tranokala mozika tsy voasakana amin'ny alàlan'ny fandefasana famandrihana karama. Saingy, tsy voatery izany. Mety hankafizinao koa ny serivisin'izy ireo maimaim-poana. Miankina aminao daholo izany.
Ireo mpampiasa azy maimaimpoana dia tsy mila karazana fisoratana anarana ary izany no zavatra mahavariana indrindra amin'ity tranonkala ity. Manolotra serivisy radio sy hira ao amin'ny tranonkalany ihany koa izy ireo.Izy ireo koa dia manana radio internet izay endri-javatra nasongadina.Betsaka ny faritra sy ny fiteny. Safidio fotsiny ny faritra misy anao ary hahazo soso-kevitra marobe avy amin'ny tranonkala ianao.
Rehefa miresaka mozika dia fantaro fa tena lehibe ny fanangonan'izy ireo.Manana ny fampiharana azy manokana izy ireo. Noho izany, raha tsy tianao ny misintona ny rindranasa hihainoana mozika dia afaka misafidy malalaka hitsidika ny tranonkala ianao ary hampiasa azy ireo. Nomena mpanera haino aman-jery tsara sy misongadina tanteraka ny mpampiasa.
Saavn dia an'ny Reliance Industries ary misy manerantany.Tranonkala mozika indianina i Saavn. Saingy, tsy vitan'ny hoe manome hira Bollywood fotsiny fa hira manerantany.Ny ampahany mahavariana momba an'i Saavn dia izy ireo manome ny Radio ho an'ireo mpampiasa ihany koa.
Eritrereto, raha mitady ny hiran'ny tarika manokana ianao dia ho azonao ao amin'ny tranonkala ny lisitry ny hirany rehetra. Eny, tsy ny hiran'izy ireo ihany. Saingy, koa ny fantsona Radio ofisialy dia azo ampiasaina malalaka amin'ny tranokala Saavn.
Hanombohana amin'ny AccuRadio dia tsy ilaina intsony ny mamorona kaonty amin'ny tranokala handrenesana hira sy rakikira.Ny mila ataonao fotsiny dia ny fitsidihana ny tranokala fotsiny ary kitiho ny fantsona onjam-peo rehetra izay afaka mankafy azy tanteraka.
AccuRadio dia manolotra Radio Radio maimaimpoana maimaimpoana miaraka amina fampielezana taonina misy ao.Ireo hira rehetra lalaovina amin'ny fantsona AccuRadio dia fantatra be ary hahafaly anao ny mihaino azy. Afaka misafidy karazan-karazany hafa koa ianao ary avy eo vao manomboka milalao ireo fantsona tianao indrindra.
Azonao atao ny misafidy malalaka ny fantsona Radio izay misy amin'ny lisitry ny onjam-peo an'arivony ary manomboka mihaino mozika araka izay itiavanao azy.Fantatrao ny zava-misy fa maro amintsika no aleony mihaino onjam-peo amin'ny Internet satria izany no mahazatra kokoa ny mihaino hira.
Ary koa, misy hoditra samy hafa tranokala misy. Noho izany, tsy mila mampiasa ny fisehosehoana mahazatra foana ianao matetika.Ka raha mitady tranokala tsy voasakana ianao dia safidy mety aminao i Saavn.Ny antony ao ambadik'ity dia manome anao hira sy radio an-tserasera koa.
Ny kalitaon'ny mozika ho azonao dia tena tsara miaraka amina hira maro samihafa.Izy ireo koa dia manana ny app-ny izay misy amin'ny Android sy iOS.Izy ireo koa dia iray amin'ireo mpaninjara mozika Bollywood be mpampiasa.
Ka ireto ny sasany amin'ireo tranonkala mozika tsy voahidy. Misy maro hafa koa. Azonao atao ny mampiasa azy mora foana mba hidirana amin'ny mozika an-tserasera na fantsona radio ihany koa. Mila mitady hatrany tranokala maimaim-poana ianao hihainoana ny mozika ankafizinao satria ireo tranonkala nitanisa ireo etsy ambony dia misy karazana hira rehetra misy miaraka amin'izy ireo. Ny ankamaroan'ireo tranonkala ireo dia malaza be ary ampiasain'ny mpampiasa maro. Manantena izahay fa mankafy azy ianao.
amazon praiminisitra voalohany isan'ny mpikambana
emulator android tsara ho an'ny pc
ny fomba hidirana maimaim-poana any bloxburg
te-hijery sarimihetsika an-tserasera maimaimpoana aho
mijery seho amin'ny fahitalavitra maimaim-poana amin'ny fizarana feno tsy misintona
te-hijery fandaharana amin'ny fahitalavitra aho